ဆေးပညာဆောင်းပါး ဘလော့ခ်ဆိုဒ်မှ ကြိုဆိုပါတယ်။ ရောက်လာသူအားလုံး ကျန်းမာ၊ ချမ်းသာကြပါစေ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ အမေးအဖြေကဏ္ဍကို အောက်မှာ ထည့်သွင်းထားပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်သက်သမျှ မေးမြန်း၊ဆွေးနွေးနိုင်ပါတယ်။ (ဆေးပညာဆောင်းပါးများကို မျှဝေ၊ကူးယူနိုင်ပါတယ်။ credit ပေးဖို့နဲ့ ဘလော့ခ်လိပ်စာ ထည့်ပေးဖို့ တောင်းဆိုပါရစေ။ ဆေးပညာစာဖတ်ပရိသတ်များအား အစဉ်ခင်မင်လေးစားလျက်........)
တင်းတိပ်၊နေလောင်၊ အမဲစက် အမာရွတ်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းတခုကတော ဆန်မှုန့်မျက်နှာဖုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းက နေပူထဲအထွက်များသူတွေမှာ အထူးကောင်းမွန်ပြီး တင်းတိပ်တွေ၊အမဲစက်တွေကို သိသိသာသာ သက်သာစေတယ်။အခုလို အပူချိန်ပြင်းတဲ့ ကာလတွေမှာ ကောင်းတယ်။ နေ့စဉ်ပြုလုပ်ရုံနဲ့ ကြည်လင်တောက်ပတဲ့ အသားအရေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဆန်မှုန့်သဘောက နေလောင်တဲ့အသားအရေတွက် အထူးကောင်းမွန်တယ်။ အမဲစက်၊ အမဲကွက်ကို ပျောက်ကင်းစေတယ်။ အသားရေကို နဂိုတိုင်းပြန်ဖြစ်စေပြီး အရေပြားအရောင် ညီညာစေတယ်။အာရှအသားအရေနဲ့လည်း အထူးသင့်တော်တယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 9:19 AM No comments: Links to this post
ကမ္ဘာပေါ်မှာ လူ (၁၀)ယောက်မှာ (၈)ယောက်ဟာ သွေးပြန်ကြောအားနည်းတဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတွေ ခံစားနေရပါတယ်။ သို့သော် အများစုဟာ သတိမပြုမိဘဲ သာမန်ခြေထောင်ရောင်ခြင်းအဖြစ် ပေါ့ဆ နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီဆောင်းပါးဟာ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ သန်း(၇)ထောင် ကျော်မှာ သန်း(၅)ထောင်ကျော်နီးပါး သတိမထားမိတဲ့ သွေးပြန်ကြောအားနည်းခြင်း၊ခြေထောက်ရောင်ခြင်း အကြောင်းကို ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ သွေးပြန်ကြောရောဂါအကြောင်းမပြောခင် သွေးကြောတွေ အကြောင်း အရင်နားလည်စေချင်ပါတယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 8:23 AM No comments: Links to this post
လူ့အချင်းဟာ လက်တဖဝါးစာ ပမာဏလောက်ရှိတယ်လို့ ဆေးကျောင်းမှာ မှတ်သားခဲ့ရဖူးတယ်။ ဆေးပညာလက်တွေ့ဆင်းတော့ အချင်းရဲ့ အတိုင်းအတာကို အတိအကျ ကျက်မှတ်ရပြန်တယ်။ အတိုင်းအတာ အလျား ၉-လက်မ၊ အထူ ၁-လက်မလောက် ရှိတဲ့ ပျော့ဖတ်ဖတ် အစိုင်ခဲကြီးက အလေးချိန် တပေါင်မက လေးလံတယ်။ အချင်းကို စက်ဝိုင်းနဲ့ ပမာပြုရရင် အလယ်ပိုင်းမှာ ထူပြီး ဘေးဖက်ရောက်လေ ပါးလေဖြစ်တယ်။ တကယိတော့ အချင်းဆိုတာ သန္ဓေသားနဲ့ မိခင်ကို မပြန်အလှန်တွယ်ဆက်ထားတဲ့ အစိတ်အပိုင်းတခု ဖြစ်တယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန် မိခင်ရဲ့အာဟာရဓာတ်ဟာ အချင်းကိုဖြတ်ပြီး သန္ဓေသားဆီရောက်တယ်။ ဒီလိုပဲ သန္ဓေသားသွေးကတဆင့် စွန့်ပစ်ပစ္စည်းမှန်သမျှဟာ အချင်းကိုဖြတ်ပြီး အမေဆီပြန်ရောက်တယ်။ သန္ဓေသားလောင်းတွယ်ကွယ်ပြီး ၈ ရက်ကြာတဲ့အခါ အချင်းကို စတင်ဖွဲ့စည်းပါတယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 8:24 PM No comments: Links to this post
ကလိုသို (သို့မဟုတ်) မအိုဆေး
ဂရိဒဏ္ဌာရီအရ Moirae ဆိုတာ ကံကြမ္မာကို ပြောတာပါ။ ကံကြမ္မာကို အဆုံးအဖြတ်ပေးရတဲ့ နတ်သမီး (၃)ပါးရှိတယ်။ သူတို့ကတော့ ဇုနတ်ဘုရား(Zeus) နဲ့ နတ်ဘုရားမ သီးမစ်(themis)တို့ရဲ့ သမီးသုံးယောက်ဖြစ်တဲ့ Clotho, Lachesis နဲ့ Atropos တို့ဖြစ်ပါတယ်။ Lachesis က လူ့သက်တမ်းကို သတ်မှတ်ပေးရတယ်။ Atroposက ဘယ်အချိန်မှာ သေမယ်ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ပေးရတယ်။ Clothoက လူ့သက်တမ်းကို ရှည်အောင် ပြုလုပ်ပေးရသူ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှည်ဖို့ ဒီနတ်သမီး သုံးပါးရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်က အရေးပါတယ်။ လူတွေစတင်မွေးဖွားချိန်ကနေ သေဆုံးချိန်ထိ ဖြစ်တည် ပျက်ဆီးမှုအားလုံးကို သူတို့ကပဲ ထိန်းချုပ်ပေးပါတယ်။ ဒီထဲမှာ အရေးပါဆုံးကတော့ အသက်ရှည်စေတဲ့ clotho နတ်သမီး ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 8:46 PM No comments: Links to this post
ရနံ့တွေမှာ မမြင်ရတဲ့ စွမ်းအင်တွေရှိနေပါတယ်။ အဆင်း၊အသံ၊အနံ့၊အရသာ၊ အထိအတွေ့ အာရုံငါးပါးမှာ အနံ့ကလည်း တပါးအပါအဝင်ဖြစ်တယ်။ ရနံ့တွေက လူ့ စိတ်ကို လန်းဆန်းစေတယ် ကြည်လင်တက်ကြွစေတယ်။ နိုးကြားစေတယ်။မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်ချက်ရှိစေတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ရနံ့ကောင်းတဲ့ ရေမွှေးကို သုံးစွဲလာကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 8:11 AM No comments: Links to this post
Burn 60 ဗိုက်အဆီအတွက် အကောင်းဆုံးဆေး
Burn 60 ဆိုတာ အဆီပိုတွေလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ ဆေးတမျိုးဖြစ်တယ်။ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ခါနီး ဒီဆေးသောက်ရင် အာနိသင်ပိုကောင်းတယ်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ကယိလိုရီရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း လောင်ကျွမ်းစေလို့ burn 60 လို့ နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။Burn 60ကို အမေရိကန် GNC ဆေးကုမ္ပဏီက ထုတ်တယ်။ GNC ဆိုတာ General Nutrition Corporation ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်တယ်။ သူက ဖြည့်စွက်အားဆေးတွေ သီးသန့်ထုတ်တဲ့ ကုမ္ပဏီဖြစ်တယ်။ Burn 60 က သစ်ဂျပိုးခေါက်အရသာနဲ့ထုတ်ထားတာဖြစ်တယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 7:21 AM No comments: Links to this post
ဒီနေ့ခေတ်မှာ အသက် (၅၀)ကျော်အရွယ် လူကြီးတွေတီဗွီဓာတ်မှန် ရိုက်ကြည့်တဲ့အခါ အသည်းမှာအဆီဖုံးနေတာ တွေ့ရတယ်။ ဒါဟာ မြန်မာတနိုင်ငံတည်း မဟုတ်ပါဘူး။ကမ္ဘာပေါ်မှာလည်း အသည်းအဆီဖုံးသူ ၉-၃၈ ရာခိုင်နှုန်းထိ ရှိနေပါတယ်။ လူသုံးယောက်မှာ တယောက် တွေ့ရတဲ့ သဘောမျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့် အဝလွန်သူရဲ့ ၆၀ ရာခိုင်နှုန်း၊ အလွန်အမင်းအဝလွန်သူတွေရဲ့ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ အသည်းအဆီဖုံးလေ့ရှိတယ်။ တကယ်တော့ အသည်းအဆီဖုံးတာ ပြဿနာမဟုတ်သေးဘူး။ အဲဒီအဆင့်ကနေ အသည်းရောင်လာရင်တော့ သတိထားသင့်ပါပြီ။ ဆေးပညာအရ steatohepatitis လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အသည်းရောင်ရမ်းမှုက ရေရှည်မှာ အသည်းခြောက်တာ၊ အသည်းကင်ဆာထိ ဆက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 6:11 AM No comments: Links to this post
ခေတ်စားလာသည့် DD cream နဲ့ EE cream
BB cream နဲ့ CC cream အကြောင်း အလှအပကြိုက်တဲ့ မိန်းကလေးတွေ သိကြတယ်။ သို့သော် DD cream အကြောင်းတော့ လူသိနည်းတယ်။ သုံးဖူးသူလည်း ရှားတယ်။ DD cream ဆိုတာ Dynamic Do-all ရဲ့ အတိုကောက်ဖြစ်ပါတယ်။ အလှအပပစ္စည်းအားလုံးကို တမျုးတည်းဖြစ်အောင် ရောစပ်ထားတာ ဖြစ်တယ်။ တကယ်က BB နဲ့ CC cream ရဲ့ အာနိသင်ကို ပေါင်းစပ်ထားတာပါ။ မျက်နှာအသားအရေကို နေ့စဉ်ကာကွယ်ဖို့(daily defence)အတွက် အသုံးပြုကြတယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 7:39 PM No comments: Links to this post
ဆရာ့ကိုတိုင်ပင်ချင်စရာလည်းရှိပါတယ် ခလေးလည်းလိုချင်ပါတယ်ဆရာ အသက်၃၅ပါ
ဂရင်ဂျီနာကို fiatula-in-ano လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဂရင်ဂျီနာဖြစိသူရဲ့ ၅၀ ရာခိုင်နှုန်းက စအိုဘေး ပြည်တည်နာ(perianal abscess)ကတဆင့် အပေါ်လှိုက်စားပြီး ဖြစ်ကြတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စအိုဘေးမှာ ဘာအနာပဲရှိရှိ ဂရုစိုက်ရတယ်။ အခန့်မသင့်ရင် စအိုနဲ့ အစာဟောင်းအိမ်ထိ လမ်းပေါက်ပြိး မြောင်းပုံစံအနာဖြစ်တတ်တယ်။ အဲလိုအနာမျိုးကို ဂရင်ဂျီနာ လို့ခေါ်ပါတယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 6:18 AM No comments: Links to this post
ကလေးတယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက အာဟာရဓာတ်ပြည့်ဝဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါမှ ဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးပြီး မှတ်ဥဏ်ကောင်းမှာဖြစ်တယ်။ ကလေး ဦးနှောက်ဟာ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီး ၃ပတ်ကတည်းက စတင်ဖွံဖြုိးနေပြီ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် မိမိကလေးငယ် ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေး ကောင်းဖို့ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ကတည်းက သတိထားစားသင့်တယ်။
Posted by dr.ayeminhtoo at 10:09 AM No comments: Links to this post
Dr. Aye Min Htoo
Facebook Online Clinic
Ecee2အရေးပေါ်အရာရောက်တဲ့ဆေး
Ecee 2ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့ အရေးပေါ်တားဆေး တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် လူငယ်လူရွယ်တွေကြား ပိုနာမည်ကြီးတယ်။ သုံးစွဲသူအများစုက...
ဆယ်ကျော်သက်တွေကို အမြဲဒုက္ခပေးတတ်တဲ့ ဝက်ခြံအကြောင်း အနည်းငယ်ဖော်ပြပါရစေ။ ဝက်ခြံကို acne လို့ ခေါ်ကြတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ဝက်ခြံပေါက်သူရဲ့ ၈၀ရာ...
မင်္ဂလာပါ ဆရာ ဆရာ့ကို ရိုသေစွာဖြင့် ဂါရဝပြုပါတယ်နော် ညီမမျက်နှာမှာ အရင်ကဝက်ခြံတွေအရမ်းထွက်ပါတယ် ...
ဟိုနေရာအရင်းမှာ အသားပိုလိုအဖုလေး ပေါက်နေလို့ပါ
အရင်​ဆုံး မိတ်​ဆက်​ပါရ​စေ ကျွန်​​တော့်​နာမည်​ ကို_ပါ အသက်​က ၃၃ ပါဆရာ ..မန်းတ​လေးကပါပဲ ဆရာ့​ဆေးခန်းကိုလဲလာပြဘူးပါတယ်​ ..ကျွန်​​တော်​​မေးချင...
ဆရာရှင့်​ ​လေထုညစ်​ညမ်းတာနဲ့ ပတ်​သက်​ပြီး ​ဖြေကြား​ပေးတာ ​ကျေးဇူးတင်​ပါတယ်​။ ဆရာရဲ့ ကျန်းမာ​ရေးနဲ့ ပတ်​သက်​တဲ့ ​ဆောင်းပါး​တွေအတွက်​ အထူး​...
မင်္ဂလာပါဆရာ အရင်တုန်းကလဲဆရာကို ကျန်းမာရေးနဲ့ပါတ်သက်တာတွေမေးဖူးပါတယ်ဆရာ စ်ိတ်ရှည်လက်ရှည်ပြန်ဖြေပေးတဲ့အတွက်လဲ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် ...
Eposoft ရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့နာကျင်မှုအတွက် ဆေးတလက်
Eposoftဆိုတာ အမျိုးသမီးများ ရာသီနဲ့ပက်သက်တဲ့ ဝေဒနာတွေအတွက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ သဘာဝဆေးဖက်ဝင် အပင်နဲ့ ပြုလုပ်ထားပြီး Zifam ကုမ္ပဏ...
Clinic 64 ဆေးခန်း
64street,between 37 & 38street, Maharmyaing(1),Mandalay.
ရေးထားသောစာများကို ဖတ်ရှုလိုပါက အောက်တွင် ထည့်သွင်း၍ ရှာပါ
ဒေါက်တာ အေးမင်းထူး၏ ကျန်းမာရေးနှင့် အလှအပရေးရာ ဆောင်းပါးများ စုစည်းမှု
Contact Form(မိမိအမည်၊အီးမေးလ်၊မေးမြန်းလိုသည့်အကြောင်းအရာကို အောက်တွင်ထည့်၍ မေးမြန်းနိုင်ပါသည်။)
96 kinds of ulcer in Myanmar မြန်မာတို့ရဲ့ အနာမျိုး(၉၆) ပါး
Abortion vs traditional medicine ရာသီသွေးနဲ့ တိုင်းရင်းဆေး
Abortion ကိုယ်ဝန်ဖျက်ခြင်း သည်းခံပါ
Abscess from injection site ဆေးထိုးတဲ့နေရာက အနာဖြစ်ရင်
Acne on face မျက်နှာပေါ်က ဝက်ခြံများအကြောင်း
Acne ဝက်ခြံပျောက်နည်းနာ အဖြာဖြာ
Acute pancreatitis ပန်ကရိယ ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ ကုသခြင်း
Acute rheumatic fever ရူမက်တစ် လေးဖက်နာ အဖျားရောဂါ
ADHD စိတ်လိုက်မာန်ပါ စိတ်ဂဏှာမငြိမ်တဲ့ပြဿနာ
Advice for matricular examination တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအတွက် အကြံပြုချက်
Air pollution လေထုညစ်ညမ်းရောဂါ
Alcohol အရက် သင်ခန်းစာ
Altitude sickness အမြင့်တက်ချင်သူများ သတိထား
Anal fistula ဂရင်ဂျီနာ ကုနည်း
Arias-Stella reaction ဆိုတာ
Artificial ripen fruit သစ်သီးတွေက ဘေးဥပါဒ်ပေးနေပြီလား
Artificial sweetener သကြားအစားထိုးပစ္စည်းတွေကြား ဘာကွာခြားလဲ
Asking for health by phone အဝေးကမေး ကျန်းမာရေး
ASO titre လေးဖက်နာပိုး စစ်ခြင်း
Attention Deficit Hyperactivity Disorder စိတ်ကဏှာမငြိမ်ရောဂါ
Baby boy or girl သားသားလိုချင်လား မီးမီးလိုချင်လား
Baby brain development ကလေးဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်
Baby developmental milestone ကလေးသူငယ်ဆိုင်ရာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုများ
Baby nutrition and supplement မွေးကင်းစ အာဟာရ
Bad breath ခံတွင်းနံ့ နံတိုင်း ရောဂါရှိသလား
Balanced diet ညီညွတ်မျှတ အာဟာရဖြစ်ဖို့
Banana diet for weight loss ငှက်ပျောသီး ဝိတ်ချနည်း
BB and CC cream ပျိုမေတို့အကြိုက် BB creamနဲ့ CC cream
Belching and stroke လေဖြတ်တာနဲ့ လေတက်တာ
Belly fat တလအတွင်း ဗိုက်ခေါက်ပြုတ်အောင်
Belly spasm ဗိုက်ကြွက်တက်ခြင်း
Benign paroxysmal positional vertigo(BPPV) အနေအထားပြောင်း အမူးရောဂါ
Benign prostatic hyperplasia ဇရာအိုနဲ့ ဆီးကျိတ်ရောင် ရောဂါ
Best exercise for weight control ဝိတ်ကျဖို့ ဘယ်လေ့ကျင့်ခန်းတွေ ကောင်းလဲ
Best way for Belly fat အလွယ်ဆုံး ဗိုက်ခေါက်ချနည်း
Betel chewing ကွမ်းယာမစားခင် ဖတ်စေချင်
Blepharoplasty မျက်ရစ်ပြင်တာမလုပ်ခင် ဘာတွေသိရမလဲ
Body scrub နဲ့အသားအရေထိန်းသိမ်းကြမယ်
Boil(furuncle) မွေးကျွတ်နာ(သို့) အနာစိမ်းတမျိုး
Boiled water drinking ရေနွေးသောက်တဲ့အကျင့်
Botox နဲ့ Fillers ဘာကွာခြားလဲ
Botox အသားအရေတင်းဆေး ထိုးခြင်း
BPPV အနေအထားပြောင်း အမူးရောဂါ
Brain development in child ကလေးဉာဏ်ရည်ဖွံ့ဖြိုးအောင်
Bruxism သွားကြိတ်လို့ စိတ်ညစ်နေလား
Burn 60 GNC Burn 60 ဗိုက်အဆီအတွက် အကောင်းဆုံးဆေး
Calorie and Energy ကယ်လိုရီနဲ့ အင်နာဂျီ
Cancer ကင်ဆာအကြောင်း သိကောင်းစရာ
Cervical cancer သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ
Cervical spondylosis ကုပ်ကျီးပေါင်းတက်ခြင်း
Chicken pox ရေမကြောက်တတ်ပေမယ့် ရေကျောက်ဆိုတာတော့ဖြစ်တတ်ပါတယ်
Chinese lunar calendar နေ့ကောင်းရက်သား ရွေးကြမလား
Cholesterol သွးတွင်းအဆီဓာတ် များခြင်း
Chronic venous insufficiency သွေးပြန်ကြောအားနည်းခြင်း
CLINIC 64 timetable လူနာကြည့်ချိန်များ သတ်မှတ်ခြင်း
Clinic for stammering စကားထစ်လို့ ဆေးခန်းပြရင်
Coffee and caffeine ကော်ဖီတခွက်နဲ့ ကဖင်းဓာတ်
Coffee related cancer ကော်ဖီကင်ဆာ
Cold sore ပြန်ဖြစ်တတ်တာ ပါးစပ်နာ
Common cold medication အအေးမိပျောက်ဆေးတွေ ဘယ်လိုရွေးချယ်ကြမလဲ
Common diseases in winter ဆောင်းရာသီမှာ ဆင်ခြင်စရာ
Contraceptive patch တားဆေးကပ်ခွာ ပေါ်ပြူလာမဖြစ်သေး
Coreal graft စက္ခုစေတနာ မျက်ကြည်လွှာ
CPR (သို့) အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း
Cracked lip နှုတ်ခမ်းခြောက်ပြီး ကွဲခြင်း
CT scan စီတီစကင်(န်)အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Dangue vaccine သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ပေါ်လာပြီ
DD cream and EE cream ခေတ်စားလာသည့် DD cream နဲ့ EE cream
Dengue Hemorrhagic Fever(DHF) မိုးရာသီနဲ့ သွေးလွန်တုပ်ကွေး အန္တရာယ်
Dengvaxia သွေးလွန်တုပ်ကွေး ကာကွယ်ဆေး ပေါ်လာပြီ
Depression and social media ဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ စိတ်ကျရောဂါဆက်စပ်နေ
Diabetic control နည်းလမ်းတကျ ဆီးချိုချပါ
Disease from pet ခွေးကြောင် ချစ်တတ်သူများ ဖတ်ရန်
Dog bite ခွေးကိုက်ခံရတဲ့အခါ
Dog bite ခွေးနှိမ်နင်းရေး အရေးကြီးပြီ
Donation after flood ရေဘေးသင့်ပြည်သူ ဘာလှူမလဲ
Dr. Aye Min Htoo ဒေါက်တာအေးမင်းထူး ပုံများ
Dry and crack lip နှုတ်ခမ်းကွဲခြင်း
Dysmenorrhoea ဓမ္မတာပေါ်စဉ် ဗိုက်နာရင်
E-cigarette အီး-စီးကရက် သတိပေးချက်
Ebola Virus အီဘိုလာရောဂါ
Eczema နှင်းခူနာအတွက် ဆိုရင်
Emergency case အရေးပေါ် ရောက်လာတဲ့အခါ
Epilepsy misbelief အတက်ရောဂါ အယူအဆမှားများ
Eposoft ရာသီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ နာကျင်မှုအတွက် ဆေးတလက်
Everybody should take responsbilityကိုယ်စီ ကိုယ်စီတာဝန်ယူသင့်တယ်
Exercise for rib fracture နံရိုးကျိုးခြင်းအတွက် လေ့ကျင့်ခန်းများ
Exercise for snoring ဟောက်သံမထွက်အောင် လေ့ကျင့်ရအောင်
Eye power reduction မျက်စိပါဝါကျအောင်
Fatty liver အသည်းအဆီဖုံးခြင်း
Fistula in ano ဂရင်ဂျီနာ ကုနည်း
Food poisoining အစာအဆိပ်သင့်ခြင်း
Food supplement for baby မိခင်တိုင်းကိုသိစေချင်တာ ဖြည့်စွက်စာ
Frequent sexual intercourse လိင်ဆက်ဆံမှုများရင်
Fungal nail ခြေသည်းမှိုပိုး
Ganglion cyst လက်ကောက်ဝတ်အကြိတ်
Garlic health benefit ကြက်သွန်ဖြူရဲ့ သိပ္ပံနည်းကျ တွေ့ရှိချက်များ
Ginkgo biloba ကမ္ဘာဦးပင်၊နှစ်တစ်ရာသီးနှင့် ပဲကော
Gonorrhoea ဂနိုရောဂါ ကာကွယ်ခြင်းဖြင့် နိုင်ယူပါ
Gout လူနာနှင့် ကောက်
Gua Sha မက်ကလောင် ခြစ်ခြင်း
Haemarrhoid လိပ်ခေါင်းရောဂါ ဆင်ခြင်စရာ
Hair loss ဆံနွယ်ပြုပြင်လှချင်သူများသို့
Health advice for fungus ပွေးဝဲညှင်းအတွက် အကြံပြုချက်
Health and knowledge ကျန်းမာရေးနှင့် အသိပညာ
Health for New Generation မျိုးဆက်သစ်တို့ ကျန်းမာဖို့
Heavy metal poisoining သတ္တုဆိပ်သင့်ခြင်း
Heel spur ဖနောင့်အတက် စိတ်မပျက်နဲ့
Height up calcium အွန်လိုင်း အရပ်ရှည်ဆေး
Hepatitis A Virus(HAV) အဖြစ်များလာတဲ့ အသည်းရောင်အသားဝါအေ ရောဂါ
Hepatitis B vaccine ကာကွယ်ဆေးထိုးတိုင်း ဘီပိုးမအောင်
Herpes zoster ရေယုန်အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Hot and cold therapy ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ အပူနဲ့အအေး ဘယ်လိုရွေးမလဲ
How to get Height တပတ်အတွင်း အရပ်ရှည်နည်း
How to get height(2) ဆယ်ကျော်သက် အရပ်ရှည်နည်း
Hyperhidrosis treatment ခြေဆီလက်ဆီထွက်နေလို့
Hyperhidrosis ချွေးထွက်သော လက်
Implanon အရေပြားအောက်ထား၍ ကိုယ်ဝန်တားခြင်း
Influenza(Flu) အအေးမိတုပ်ကွေး ကင်းဝေးအောင်
Instant noodle and health ခေါက်ဆွဲခြောက်ထုပ်နဲ့ ကျန်းမာရေး
Irritable bowel syndrome(IBS)အူလမ်းကြောင်း လှုပ်ရှားမှုရောဂါ
Ischaemic heart disease နှလုံးသွေးကြောကျဉ်းရောဂါ
Japanese encephalitis ဂျပန်တွေစခဲ့တဲ့ ဦးနှောက်ရောင်ခြင်း
Kidney stone ဆီးကျောက်တည်နေသလား
Klotho ကလိုသို (သို့မဟုတ်) မအိုဆေး
Lab address in Mandalay (1) ဆေးရုံဓာတ်ခွဲခန်းများ လိပ်စာသိလိုပါသလား
Lab address in Mandalay (2) ချမ်းငြိမ်းအောင် ဓာတ်ခွဲခန်း
Lab address in Mandalay (3) Right labဓာတ်ခွဲခန်း
Lab address in Mandalay (4) လင်းရောင်ခြည် ဓာတ်ခွဲခန်း
Lab address in Mandalay (5) အင်ကြင်းဖြူ၊ ဓူဝံနှင့် Hi Techဓာတ်ခွဲခန်း
Laxative addiction ဝမ်းနှုတ်ဆေး စွဲနေပြီလား
Long hair ဆံပင်ရှည်ထားသူများ သတိထား
Malaria ငှက်ဖျားအကြောင်း တစေ့တစောင်း
Measles-rubella vaccine ဝက်သက်ဂျိုက်သိုး ဘာ့ကြောင့်ထိုးလဲ
Media and ulcer မီဒီယာနှင့် အနာ
Melasma မိန်းကလေးတိုင်းသိသင့်တဲ့ တင်းတိပ်
Menstrual pain ဓမ္မတာပေါ်စဉ် ဘာတွေရှောင်သင့်လဲ
Menstruation ဓမ္မတာပေါ်စဉ် ဘာတွေရှောင်သင့်လဲ
MERS အရှေ့အလယ်ပိုင်း ကူးစက်ရောဂါ(သို့)မားစ်
Method of weight gain ဝနည်းလမ်းညွှန်
Migraine headache ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်ဝေဒနာ
Migraine မိုက်ဂရိန်း ခေါင်းကိုက်ခြင်း
Minerals နေ့စဉ်လိုအပ် သတ္တုဓာတ်များ
Most popular photo လူကြိုက်အများဆုံး ပုံများ
Muscle cramps ကြွက်တက်လာပြီ ဆိုရင်
Nasal repair by manually နှာတံလေးစင်းနေအောင်
Neck tightness ဇာတ်ကြောတက်ရင်
New year's wishes ကျန်းမာစေကြောင်း နှစ်သစ်ဆုတောင်း
OA အရိုးအဆစ်ရောင် ရောဂါ
Omega3ကျန်းမာရေးအတွက် အထောက်အကူပေးမယ့် Omega 3
Online Intro အွန်လိုင်းမိတ်ဆက်စာ
Organic medicine အော်ဂင်းနစ်ဆေး
Parkinson disease ပါကင်ဆန်ရောဂါ
Parkinson disease ဖိုးဖိုးဖွားဖွား သတိထားစရာ ပါကင်ဆန်ရောဂါ
Pearly penile papule(PPP) ဟိုနေရာက ထွက်လာတဲ့ အဖုလေးများ
Photo gallery (1) ဓာတ်ပုံများ (၁)
Photo gallery (2) ဓာတ်ပုံများ (၂)
Photo gallery (3) ဓာတ်ပုံများ (၃)
Pieces of note in doctor's life(3) ဆရာဝန်ဘဝထဲက မှတ်စုအပိုင်းအစများ(၃)
Pityriasis lichenoid ခရုသင်းလို အဖြူကွက်
Placenta extract လူ့အချင်းက ထုတ်တဲ့ဆေး
Pneumonia နမိုးနီးယား အဖြစ်များလို့ သတိထားစို့
Poliomyelitis ပိုလီယိုကင်းစင် ကမ္ဘာတစ်ခွင်
Pompholyx ချွေးထွက်ရာကဖြစ်တဲ့ အရည်ကြည်ဖုလေးများ
Popular slimming pils လူကြိုက်အများဆုံး ပိန်ဆေးများ
Pregnancy test ကိုယ်ဝန်ရှိ၊မရှိ ဆီးစစ်ကြည့်
Premarital checkup လက်မထပ်ခင် ဆေးစစ်ရင်
Prickly heat နွေရာသီမှာ မိတ်ယားနာ
Q and A about ecee2အရေးပေါ်တားဆေး အမေးအဖြေ
Rabies ခွေးကိုက်ခံရတဲ့ အခါ...........
Remedies for cough ချောင်းဆိုးခြင်းအတွက် အိမ်သုံးနည်းများ
Restless legs syndrome ခြေထောက်လှုပ်တဲ့ဝေဒနာ အဖြေရှာ
Rheumatoid Arthritis လေးဖက်နာ အဆစ်ရောင်ရောဂါ
Rice powder mask တင်းတိပ်အတွက် ဆန်မှုန့်မျက်နှာဖုံး
Rice toner ဆန်မှုန့်တိုနာ
Rice water ဟော့ဖြစ်နေတဲ့ ဆန်ဆေးရေအကြောင်း
Ringworm လိုက်နာရှောင်ကြဉ် ပွေးကင်းစင်
Road to success အာင်မြင်ခြင်း လမ်းမများဆီသို့
Saya Kho ဆရာခိုသောက်ခြင်း
Scabies သိမှတ်ဖွယ်ရာ ဝဲရောဂါ
Shingles vaccine ရေယုန်ကာကွယ်ဆေး
Shingles ရေယုန်နာ(သို့) ရေကျောက်၏ နောက်ဆက်တွဲ ပြဿနာ
Shoulder pain ပခုံးဝေဒနာ သက်သာစေဖို့
Sinusitis ထိပ်ကပ်နာ ဆိုတာ
Skin care product အလှအပရေးရာ ပစ္စည်းများ(၂)
Skin care product အလှအပရေးရာ ပစ္စည်းများ
Skin care အသားအရေ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းခြင်း
Skin whitening injection မိန်းကလေးတွေမေးတဲ့ အသားဖြူဆေး
Sleeping ကျန်းမာရေးအတွက် အိပ်စက်ခြင်း
Slim face မျက်နှာသွယ်ဖို့ အလွယ်ဆုံးနည်း
Slimming pills (1) ပိန်ဆေးမသုံးခင် ဘာတွေသိရမလဲ
Slimming pills (2) ပိန်ဆေးမလိုပါ ရွှေမြန်မာ
Slimmy face မျက်နှာလေး သွယ်လျလှပနေအောင်
Stammering drug စကားထစ်သူအတွက် သောက်ဆေး
Stammering စကားမထစ်အောင် ပြုပြင်ကြည့်ရအောင်
Steroid induced rosarea မျက်နှာအသားအရေပျက်ဆီးနေလား
Steroid overuse(Cushing's syndrome) စတီးရွိုက်အရောင်ကျဆေး အလွန်အကျွံသောက်သုံးခြင်း၏ နောက်ကွယ်
Subcutaneous injection method အဆီလွှာထဲရောက်အောင် ဆေးဘယ်လိုထိုးမလဲ
Summer season နွေရာသီနဲ့ အပူ
Swimming in sea ပင်လယ်ရေမကူးခင်
Syphilis ဆစ်ဖလစ် ကာလသားရောဂါ
The meaning of Medicine ဆေးပညာရပ် ဆိုတာ
Thyrotoxicosis သိုင်းရွိုက်နဲ့ လည်ပင်းရှင်းလင်းကြစေဖို့
Toner Toner အကြောင်း သိကောင်းစရာ
Ultraviolet radiation and Thingyan festival ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်နဲ့ နေရောင်ပြင်းပြင်း သင်္ကြန်တွင်း
Urine LH surge အမျိုးသမီးတွေ မျိုးဥကြွေရက်သိရှိဖို့
Urine test analysis (1) 24hour urinary VMA ဆိုတာ
Vaccine available in clinic ဆေးခန်းတွင်ရနိုင်သော ကာကွယ်ဆေးများ
Varicose vein သွေးကြောထုံးရင် ဘယ်လိုပြုပြင်
Virus ရောဂါကပ်ဆိုး ဗိုင်းရပ်စ်ပိုး
Vitamin A သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၁)
Vitamin B1 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၂)
Vitamin B12 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၉)
Vitamin B2 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၃)
Vitamin B3 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၄)
Vitamin B5 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၅)
Vitamin B6 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၆)
Vitamin B7 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၇)
Vitamin B9 သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၈)
Vitamin C သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၁၀)
Vitamin D သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၁၁)
Vitamin E သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၁၂)
Vitamin K သက်စောင့်ဓာတ်များကို လေ့လာခြင်း(၁၃)
Vitiligo စိတ်ညစ်စရာ အရေပြားရောဂါ(သို့)ခရုသင်း
Walking လမ်းလျှောက်တဲ့ အခါ
Water advantages ဆေးပညာကပြောတဲ့ ရေအကျိုးဆယ်ပါး
Weight based on height အရပ်ကြည့်ပြီး အလေးချိန်တွက်လို့ရတယ်
Weight control for Myanmar မြန်မာတွေ ပိန်ဖို့
Weight favoured food ဝိတ်တက်စေတဲ့ အစားအစားများ
Weight gain ဝချင်လှချင် ဝိတ်တက်လိုလျှင်
Weight loss within 7days တပတ်အတွင်း ဝိတ်ကျချင်လား
Weight loss ကိုယ်တွေ့ဝိတ်ချနည်း
White patch သမင်ဖြူလိုအကွက်
Wound healing ထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့အခါ အနာကျက်မြန်အောင်
Yoga health benefit ယောဂနဲ့ ရောဂါ
Zoonotic disease တိရိစ္ဆာန် ကူးစက်ရောဂါ
ASO titer လေးဖက်နာပိုး စစ်ချင်လို့
Acne scar ဝက်ခြံထွက်ပြီး အမာရွတ်ကျန်နေလို့
Ankylosing spondylosis ကြီးမှပေါင်းတဲ့ရောဂါ
Antibiotic can harm pregnancy ပိုးသတ်ဆေးတွေက ကလေးကိုထိခိုက်စေလား
Antibiotic for acne ဝက်ခြံပျောက်အောင်
Arthritis and blood test အရိုးအဆစ်ရောင်ခြင်းနှင့် သွေးစစ်ခြင်း
Breast milk production due to COC pills တားဆေးသုံးရင်း နို့ထွက်နည်းနေရင်
Burning sensation of body ဆီးနဲ့ ခန္ဓာ ပူနေပါလျှင်
Burning sensation of urine ဆီးပူဆီးအောင့် ဖြစ်နေလို့ပါ
Causes of infertility အိမ်ထောင်ကျပြီး ကလေးမရတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ
Chicken pox ခေါင်ရည်သောက်၍ ငပိစား ရေယုန်ပေါက်လား
Chronic dermatitis နှင်းခူနာဆိုတာ သေချာပြီလား
Clavicle fracture ညှပ်ရိုးကျိုးပြီး အလေးမ မသင့်ပါ
Diagnosis of little finger swelling လက်သန်းဆစ်အရိုးရောင်တာ ဘယ်လိုရောဂါလဲ
Diet for hyperthyroidism သိုင်းရွိုက်ဟော်မုန်းများတဲ့အခါ ဘယ်လိုဓာတ်စာ စားမလဲ
ESR(Erythrocytes Sedimentation Rate) ESRဆိုတာ ရောဂါတပ်ဖို့မဟုတ်
Early ejaculation အိမ်ထောင်သည်တွေလည်း လာကြသည်
Exophthalmos လည်ပင်းကြီးပြီး မျက်လုံးပြူးတာ
Eye power မျက်စိပါဝါ ဖြေကြားပေးပါ
Female question (1) မိန်းမသားတို့ စပ်စပ်စုစုမေးခွန်းများ(၁)
Female question (2) မိန်းမသားတို့ စပ်စပ်စုစုမေးခွန်းများ(၂)
Fetal heart beat ကလေးနှလုံးခုန်တာ ဘယ်တော့လဲ
Fungal nail infection ခြေသည်းရောဂါဆေး သိချင်လို့ပါဗျာ
Genital warts ဟိုနေရာအရင်းမှာ အသားပိုလိုအဖုလေး ပေါက်နေလို့ပါ
Gonorrhoea clinic ဂနိုကျရင် ဘယ်ဆေးခန်းပြမှာလဲ
HBV question ဘီပိုးရောဂါ မေးခွန်း(၁)
HBV serial result ဘီပိုးအဖြေတွေကို တချက်ကြည့်ပေးပါ
Health service in Myanmar မြန်မာနိုင်ငံ ကျန်းမာရေးစနစ်
How to diagnose ရောဂါနာမည် ဘယ်လိုတပ်မလဲ
IUCD(intrauterine contraceptive device)သားအိမ်တွင်းပစ္စည်း
Infant growth retardation ကလေးကြီးထွားမှုနည်းနေသလား
Intussusception and volvulus အူခေါက်ခြင်းနဲ့ အူထပ်ခြင်း
Irregular bowel အူလှုပ်ရှားမှုမမှန်တာ ပျောက်နိုင်ပါ့မလား
Itchy in HBV patient ဘီပိုးရှိရင် ယားတတ်သလား
Itchy rash on testis မတရားယားယံလာရင် ဘာဆက်လုပ်မလဲ
Itchy testis ဟိုနေရာမှာ ယားနေလို့
Leg pain on prolong standing မတ်တပ်ရပ်လို့ခြေထောက်နာ
Letter from doctor ဆရာဝန်ထံမှ မိတ်ဆက်စာ
Medicine from doctor ဆေးခန်းကပေးလိုက်တဲ့ ဝဆေး
Menstrual drug သမီးမေးတဲ့ ရာသီပေါ်ဆေး
Myocardial infarct နှလုံးရောဂါ ကောင်းရဲ့လားဆရာ
OC pills and irregular bleeding ကိုယ်ဝန်တားဆေးပြောင်းသောက်ပြီး သွေးဆင်းတာ
Oily skin အဆီပြန်တဲ့ အသားအရေ
Ovulation after uterine curettage သားအိမ်ခြစ်ပြီး ဘယ်အချိန်သားဥကြွေလဲ
Penile injection and scrotal swelling ကြီးဆေးထိုးတာ အဆင်မပြေပါ
Penis enlargement ဆိုဒ်နဲ့မဆိုင် နားလည်နိုင်ပါစေ
Pregnancy ဘာကြောင့် ကိုယ်ဝန်မရသေးတာလဲ
Question and Answer မေးခွန်းအတိုအထွာ(၁)
Question from mother သားသမီးအတွက် မေးခွန်း
Radioactive Iodine အိုင်အိုဒင်း ဓာတ်ရောင်ခြည်ဆေး
Skin rash အရေပြားတွင် အနီဖုများပေါက်ခြင်း
Sleep apnoea and RBBB နှလုံးရောဂါနဲ့ ဟောက်ခြင်း
Stomach Problem အစာအိမ်ဆေး မစပေးခြင်း
Swimming and health ပင်လယ်ရေနှင့် ကျန်းမာရေး
Testis size အရွယ်မတူ စိတ်ညစ်နေသူ
To become successful writer စာရေးဆရာဖြစ်ချင်သူများသို့
Two questions ထွေလီကာလီမေးခွန်း နှစ်ခု
Writer and doctor ဆရာဝန်စာရေးဆရာဖြစ်ချင်လို့